Iindaba - IiNkqubo zoMbane weSolar kunye nokuQhushumba kweSoftware Isolator
Zininzi izehlo zomlilo eNew South Wales kwiveki ephelileyo okanye ezibandakanya iisistim zamandla elanga- kwaye ubuncinci zimbini kucingelwa ukuba zibangelwe lutshintsho lwedwa.
Izolo, uMlilo kunye noHlangulo iNew South Wales ixele ukuba ibiye kwisiganeko kwindlu eseWoongarrah kwiCentral Coast emva kokuba umntu ebefowunele kathathu exele ngomsi ophuma kuphahla lwendlu.
"Abacimi-mlilo abavela kwizikhululo zomlilo zaseHamlyn Terrace naseDoyalson bafika kwindawo emfutshane emva kwexesha kwaye bakwazi ukucima umlilo ngokukhawuleza kwaye baqinisekisa ukuba awusasazekanga," utshilo uMlilo noHlangulo. "Icandelo lophando ngomlilo kunye necandelo lophando eFRNSW ngoku lisebenza ukufumanisa unobangela womlilo, ekukholeleka ukuba uqale kwindawo yokuzahlula."
Nge-30 kaDisemba, abacimi-mlilo kunye namapolisa babizelwa kwidilesi eseNewcastle suburb yaseBar Beach emva kweengxelo zophahla lwendlu lweepaneli zelanga ezazitshisa. Kwakhona, umlilo wacinywa ngaphambi kokuba kwenzeke nawuphi na umonakalo omkhulu. Isizathu esinokubangela khange sichazwe.
UMlilo noHlangulo i-NSW yathi kunyaka ophelileyo imililo enxulumene nelanga yenyuka kaninzi kwiminyaka emihlanu edlulileyo, kodwa khange ibonelele ngamanani. Ngaphezulu kwe-600,000 yeenkqubo zamandla elanga ezifakiwe eNew South Wales, kwaye naphina apho izixhobo zombane ezixhaphakileyo zibandakanyeka khona kuyakubakho izehlo- kodwa oku akufuneki kwamkelwe nje ukuba kukho indawo yokuphucula.
I-FRNSW ngaphambili iqaphele ukutshintshwa kwedwa bodwa kuye kwabalelwa malunga nesiqingatha semilambo yamandla elanga kurhulumente. Ngelixa inani labazodwa eluphahleni bengoyena mntu khange akhankanywe, kusenokwenzeka ukuba uninzi lwabo lunikwe irekhodi lezixhobo eziyingxaki.
Iswitshi sophahluli sodwa se-DC sisitshintshi esisebenza ngesandla esifakwe ecaleni kwepaneli yelanga eyenza ukuba i-DC yangoku iphakathi koludwe kunye ne-inverter yelanga icinywe. Ngelishwa, yayijongwe njengesixhobo esongezelelweyo sokhuseleko kwaye iyimfuneko yazo zonke iinkqubo zamandla elanga e-Australia. Kodwa kubonakala ngathi kuphela kwelizwe elisafuna ukusetyenziswa kwazo.
Uninzi lwabafakeli belanga bayakudelela ukufaka ufakelo oluphezulu kwi-switch switch ye-DC kwaye kukho intshukumo yokuba imfuneko isuswe kwimigangatho yase-Australia- kwaye ayinakufika kwakamsinya. Kukwakho nokutyhala ukuze kupheliswe yedwa. endaweni yoko ifuna ikheswa ebandakanyiweyo ngaphakathi kwe-inverter yelanga.
Zizo ezo izinto ezinokuphuculwa ezinokuthi zenziwe- enye yabanini kukuba iinkqubo zabo zihlolwe.
Ukutshintsha kakuhle kwe-DC isolator esemgangathweni efakwe ngokufanelekileyo kwaye ikhuselwe ngokufanelekileyo sisigqubuthelo ngokubanzi kukhuselekile. Isigqubuthelo sesinye isidingo ebesikade sikhona ixesha elithile kwaye iswitsheli esizimeleyo kwisehlo sangayizolo khange sibonakale singenayo. Mhlawumbi ufakelo luye lwangaphambi kwemfuneko, kodwa ukuseta ngokubanzi kujongeka njengokungaqhelekanga.
Ukhuseleko lomlilo sesinye isizathu esibalulekileyo sokukhetha isifaki esifanelekileyo selanga. Kodwa ngaphandle kwecandelo kunye nomgangatho wofakelo kwaye unikwe iimeko ezinzima zophahla lwe-DC esophahla sedwa kunye nezinye izinto zesixokelelwano samandla elanga kufuneka sinyamezele kwiminyaka emininzi, kubalulekile ukuba kwenziwe uvavanyo kunye nenkqubo yovavanyo olwenziwa rhoqo kwiminyaka embalwa.
UMichael ubambe inkungu yelanga emva kokuthenga izinto ukuze zidibanise inkqubo encinci ye-PV ngo-2008. Ebesenza ingxelo ngeendaba zamandla elanga zase-Australia nezamazwe ngamazwe ukusukela ngoko.
Emva kwayo yonke loo nto, yiyo loo nto benyanzelisa into ebubudenge yokubeka ii-DC ezizimeleyo eluphahleni, ukuze zibangele iingxaki, akunjalo?
Kufana nokufuna iinkqubo zamanzi ashushu ukuzala kunye nokusasaza iLegionella, ngokuthintela amanzi ashushu kwizifudumezi zamanzi.
Ungaze uyiqonde ngokwenyani loo logic yodwa ye-DC kufuneka ibekho kwiiphaneli zophahla. Umsebenzisi ophakathi akazukuphakama ileli eya kwahlulahlula iiphaneli ngaso nasiphi na isizathu. Ababodwa bodwa kufuneka babe kumgangatho womhlaba ukufikelela ngokulula kuwo.
Ndineesistim zelanga ezi-3. Eyokuqala ifakelwe ngo-2011. Akukho DC iyodwa kwipaneli kodwa kukho i-DC eyahlula ecaleni kwe-inverter.
Inkqubo yesithathu yafakwa ngo-2018, inee-isolators ze-DC kwiiphaneli zophahla kunye nokuba secaleni kwe-inverter (iseti ephindwe kabini ye-DC eyodwa).
Isigqumathelo sigcina ilanga licinywe kwiscutu sodwa esinceda ukuyeka ukuba shushu kakhulu kwaye kuthintela ukonakaliswa kwe-UV. Ikwagcina eyona imbi kakhulu kuyo.
I-ADELS NL1 Series DC Isolator switch iyasetyenziswa kwindawo yokuhlala ye-1-20KW okanye inkqubo yorhwebo, ibekwe phakathi kweemodyuli ze-photovoltage kunye nee-inverters. Ixesha lokurola lingaphantsi kwe-8ms, eligcina inkqubo yelanga ikhuseleke ngakumbi. Ukuqinisekisa uzinzo kunye nobomi benkonzo ende, iimveliso zethu zenziwa ngamacandelo anomgangatho ofanelekileyo. Umbane ophezulu ufikelela kwi-1200VDC. Inesikhokelo esikhuselekileyo phakathi kweemveliso ezifanayo.
Ixesha Post: Jan-12-2021